किन खोसियो ‘जसपा’मा डा. भट्टराईको शीर्ष पद ? – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०८:१५
पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहने गरी दल दर्ता गरिएको छ ।यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अध्यक्ष बनाउने सहमति गरिएको बताइएको थियो । तर, दल दर्ता गर्दा भट्टराईको नाम राखिएको छैन । उनलाई चौथो वरियतामा राखिएको छ । उनी अगाडी दुई अध्यक्ष र अशोक राई रहेका छन् । भट्टराईपछिको बरियतामा राजेन्द्र महतो छन् ।